किन घटिरहेको छ सेयर बजार ?
शिव सत्याल काठमाडौं, २३ भदौ
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले बहुमत ल्याएर पुनः नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि भारतको पुँजी बजार मापक बम्बे स्टक एक्सचेन्ज परिसूचक बीएसई सेन्सेक्स ४० हजारको हाराहारीमा पुग्यो ।
पछिल्लो समयमा भारतीय अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा परेको तथ्य बाहिर आयाे । यस्ता तथ्य सार्वजनिक भएसँगै बीएसई सेन्सेक्स करिब ४ हजार अंकले घटेर ३६ हजारको हाराहारीमा आयो । र, भारत सरकारले समस्यामा परेको अर्थतन्त्र उकास्न नीतिगत सुधारको काम थालेको तथा सुधारका प्रतिबद्धता पनि जनाएपछि आज (८ सेप्टेम्बर, २०१९) बीएसआई परिसूचक ०.९७ प्रतिशतले बढेर ३७ हजारको हाराहारीमा पुग्यो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र के कस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्दै छ भन्ने कुरा कुनै पनि देशको पुँजीबजारले प्रष्ट देखाउँछ भन्ने छिमेकी देश भारतको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । नेपालको पुँजी बजार (जसलाई सेयर बजार मात्रै भन्दा हुन्छ) करिब १ वर्षदेखि शिथिल र थकित छ । कुनै दिन वा कुनै साता केही बढ्यो भने त्यसको भोलिपल्टै वा अर्काे साता घटेर फेरि पहिलाकै अवस्थामा आइपुग्छ । नेपालको सेयर बजारमा चरम निराशा छ ।
नेपाली सेयर बजारमा यस्तो निराशाको कारण के हो ? अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्येक्ष परोक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्नेहरूको मनमा शयद यही प्रश्न घुमिरहेको छ ।
बजार बढ्यो भने ‘कालो धन आएको होला, म छानबिन गर्छु’ भन्ने, र घटेपछि ‘मैले छानबिन छोडें’ भन्ने ‘टाइप’को नियामकको प्रसंग यहाँ ननिकालौं । र, सेयरको मूल्य सय रुपैयाँ हो, सबै कम्पनीको सेयर मूल्य सय रुपैयाँभन्दा तल आयो भने मात्रै बजार घटेको मानिन्छ, बोनस सेयर भनेको बिनालगानी पाएको चिज हो भन्ने सोच पाल्ने ‘विद्वान’हरूको विषयमा पनि यहाँ चर्चा नगरौं ।
आज हामी भदौको चौथो सातामा छौं । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ । असोजमा दसैं छ । दसैंपछि तिहार आउँछ । अर्थात् दशैंमा टीका लगाउँदा र तिहारमा देउसी खेल्दाखेल्दै असोज र कात्तिक बितेको पत्तो हुदैन । मंसिर एक महिना त हो, पुससम्ममा त कम्पनीले लाभांश दिइसक्छन् नै ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचिकृत कम्पनीहरू गतवर्षको नाफाबाट भटाभट लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको डोमिनेसन छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकै बोलवाला छ । वाणिज्य बैंकहरूको सत लाभांश क्षमता १५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ । अर्थात्र ३ महिना लगानी गरेको आधारमा करिब १५ प्रतिशत लाभांश पाइने समयमा पनि सेयर बजारमा आकर्षण किन छैन ? यो अचम्मको विषय हो ।
पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने अन्य पक्षको पनि चर्चा गरौं । विगत ३ वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । स्थिर सरकार छ । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ । अनलाइन कारोबारको प्रणाली पनि चलेको छ । ताप्लेजुङको कुनै गाउँमा बस्ने वा काठमाडौंको पुतलीसडकमा हुने व्यक्तिले सेयर किन्न वा बेच्न उत्तिकै अवसर पाएको छ ।
यति मात्रै होइन, सेयर किन्न चाहिनेजति पैसा पुगेन भने सेयर ब्रोकरबाटै ऋण पाइने (मार्जिन लेण्डिङ) व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदै छ । आर्थिक वा गैरआर्थिक कारणले कुनै प्रकारको अवरोध वा समस्या देखिँदैन । कम्पनीहरूको नाफा घटेको छैन । लाभांश बुक गर्ने बेला आएको छ । यस्तो बेलामा पनि किन घटिरहेको छ सेयर बजार ?
आफूलाई जे समस्या आइपर्‍याे, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जस्तो लाग्दोरहेछ । ठेस लागेर औंला फुट्यो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो पीडा हो जस्तोलाग्दो रहेछ । यस्तै दाँत दुख्यो, औंलाको हड्डी दुख्यो वा यस्तै अरुले सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्ने चोट वा पीडा पनि सहने व्यक्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो जस्तो लाग्ने रहेछ । त्यस्तो बेलामा पित्त थैलीको क्यान्सर वा एचआईभी जस्ता प्राणघातक रोग पनि छन् भन्ने बिर्सने अवस्था आउने रहेछ ।
अहिले नेपाली सेयर बजार यस्तै अनुभूत गरिरहेको छ । मन्त्री वा अन्य सरकारी अधिकारीहरू अहिले जुनसुकै संस्था वा निकायको कार्यक्रममा गएर बोले भने पनि तिमीहरू बद्मास छौं भनिरहेका हुन्छन् । उद्योगीको फोरममा गएर उद्योगी खत्तम, व्यापारीको फोरममा गएर व्यापारी खत्तम, कर्मचारीको फोरममा गएर कर्मचारी खत्तम, लगानीकर्ताको फोरममा गएर लगानीकर्ता खत्तम, पत्रकारको फोरममा गएर पत्रकार खत्तम, वकिलको फोरममा गएर वकिल खत्तम भनेपछि उनीहरूको मनोबल खस्कनुको विकल्प हुँदैन ।
सेयर बजारमा लगानी गर्ने भनेको जोखिम लिने पनि हो । मनोबल कमजोर भएको व्यक्तिले जोखिम लिन सक्दैन । र, अर्काे कुरा के पनि हो भने नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ता छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । कारोबारी मात्रै छन् । जति लगानीकर्ता छन्, तिनीहरू चुपचाप बसेका छन् । पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । आफ्नो लगानीको लागत घटाइरहेका छन् । तर, कारोबारी सुस्ताएकाे मात्रै होइन, छटपटाएका छन् । मनोबल खस्केका कारोबारीले जोखिम लिएनन्, उनीहरूको गतिविधि कम भएपछि बजारमा कारोबार कम हुन थाल्यो र बजार घट्यो ।
अहिले सेयर बजारमा निराशाले जितिरहेको छ । कुनै दिन आफ्नो सेयरको मूल्य १० रुपैयाँ बढ्यो भने त्यो सेयर बेच्ने कारोबारीको भीड लाग्छ । अनि त्यही मान्छे भन्छ– बजार घटिरहेको छ । बेच्नेको भीड ठूलो भएपछि बजार घट्छ नै । अहिले भएको यही हो ।
अर्काे कुरा, सेयर बजारबारे ज्ञानको कमी छ । कुनै पनि सेयरधनीले आफ्नो कम्पनीको संचालक समितिमा कोको छन्, कस्तो व्यवस्थापन टिम छ, यसको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना के कस्ता छन् भन्नेजस्ता कुराको जानकारी लिनेको संख्या कम छ ।
सेयर बजारबारे जानकारी लिन चाहने व्यक्तिले सूचना पाउने अवस्था पनि छैन । जस्तो कि नबिल बैंकको विगत १० वर्षदेखिको लाभांश वितरणको तथ्यांक हेर्न खोजियो भने सोही बैंकको १० वर्षदेखिको वार्षिक साधारणसभाको किताव खोज्न थाल्नुपर्छ । एकै ठाउँमा एकीकृत तथ्यांक नै पाइँदैन ।
नेपाली सेयर बजार एकदमै अस्वाभाविक छ । केही महिनाअगाडि १८ सयको विन्दुमा पुगेको बजार केही महिनापछि नै १५ सयमा झर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा बजारलाई नियमन गर्न ल्याएको एउटा व्यवस्थाले सेयर बजार मापन गर्ने रेखालाई केही मिटर तलमाथि पारिदिन्छ । यस्तो अस्वाभाविक बजारमा विदेशी लगानीकर्ता वा वास्तविक लगानीकर्ता आउने सम्भावना कम हुन्छ । अहिलेका जस्ता कारोबारी हावी भएको बजारले देखाउने प्रतिक्रिया यस्तै हो ।
अहिले सेयर राफसाफको काम सीडीएसीले गरिरहेको छ । उसको काम सेयरको निक्षेप गर्ने हो । राफसाफ गर्ने निकाय नै छैन । मैले बेचेको वा किनेको सेयरको राफसाफ गर्न गएको दिन ब्रोकरले ताला लगाएर भागेको रहेछ भने मेरो लगानी के हुन्छ ?
विषय अरु पनि छन् । नीतिगत रूपमा स्वागतयोग्य नयाँ भारित औसत लागत विधि कार्यान्वयन निकै जटिल बन्न पुगेको छ । सरकारले नयाँ कर विधिको कार्यान्वयन गर्दा विद्यमान कारोबार, तथ्यांक, हिसाब प्रणाली र व्यावहारिक पाटोलाई ध्यान नदिँदा सेयर विक्रेताहरू थाहा नभएको वा निर्धारण गर्नै कठिन लागतको कागजी स्वघोषणा र प्रमाणीकरणका लागि औंठाछापसहित दस्तखत गर्न ब्रोकर कार्यालय धाउन बाध्य छन् ।
करको तालुक सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयबाट सहजै समाधान गर्न सकिने कर गणना प्रणालीको समाधान निकाल्नभन्दा लगानीकर्तालाई नियामक, बजार सञ्चालक, डिपोजिटरीकोमा कुदाउने र बैठकहरूमा भुलाउने काम भइरहेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड पनि समाधानका लागि ठोस पहलकदमीभन्दा अल्मल्याउने रणनीतिको साक्षी बसिरहेको छ ।
सेयर बजारको मुख्य हिस्सेदार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यावसायिक र स्वेच्छिक मर्ज वा प्राप्तिमा गइरहेको अवस्थामा बिग, मेगा र फोर्स मर्जरका हल्लासँगै कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने ? त्यसको व्यवसाय कस्तो हुने ? प्रतिफल कति हुन्छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नले लगानीकर्तालाई सताएको छ ।
अनेक अन्यौलतासँगै पहिले नै सुस्ताएको सेयर बजार मौद्रिक नीतिले मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थप सुविधा र छुटको नीति लिएसँगै लगानीकर्ताहरू विस्तारै कम्पनी छानेर लगानीका लागि तयार हुँदै थिए । यही बेला राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी स्प्रेड गणना, उमेर हद, काउन्टर–साइक्लिक बफरजस्ता नयाँ प्रावधानहरू ल्यायो । यी प्रावधानले पुनः फोर्स मर्जरमा लगिने अनौपचारिक सन्देश प्रवाह गर्‍याे ।
यस्तो सन्देश प्रवाह भएपछि कुन बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने वा नरहने ? कोसँग कति स्वापमा मर्ज हुने ? मर्ज पछिको वित्तीय अवस्था के हुने ? नयाँ स्प्रेड गणना विधिले कति असर गर्ने ? काउन्टर साइक्लिक बफर कसरी जुटाइन्छ ? भन्ने जस्ता अनेक प्रश्नसँगै बैंकको व्यवथापन र सञ्चालक सम्बन्धमा समेत अन्याेलता सृजना भयो । नीतिगत स्थिरतासँगै बजारमा प्रवेश वा थप लगानीका लागि तयार लगानीकर्ताहरू समेत पुनः सोच्न बाध्य भए ।
धितोपत्र बोर्डले हालै ल्याएको बुक विल्डिङ र हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन हाल्न पाइने भन्ने व्यवस्था सुन्नमा जति रमाइलो छ, त्यत्तिकै अन्याेलपूर्ण छ । कुन आधारमा मूल्य तय हुने ? स्पष्ट आधारबिना नै परीक्षणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली ल्याउन लागिएको छ ।
अर्काे कुरा के पनि छ भने बजारमा स्थायित्व प्रदान गर्ने भनेर आएका म्युचुअल फण्डहरू आफूसँग भएको १०औं अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्व्याज खाइरहेका छन् । यसले पनि बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेन ।
नेपाली सेयर बजारको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने अहिलेको गतिविधिले सेयर बजारको वियरिस साइकल पूरा भयो भन्नेमा कोही विश्वस्त छैनन् । बजार अझै घट्छ वा तत्काल बढ्दैन भन्ने मनोविज्ञान सबैभन्दा जब्बर भएर बसेको छ । यस्तै कारणले सेयर बजारलाई निराश पारिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, २३ भदौ २०७६, १६:२०:००
शेयर बजारमा ९९ कम्पनीको नाफा, कसको कति ?
‘मेरो शेयर’को एकाउन्ट नवीकरण पनि अब ई–सेवाबाटै
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्दै